Rooti leh farmaajo cusub iyo fersken sauteed | Cuntooyinka Jikada
Roodhi leh jiis cusub iyo fersken la shiiday
Maria vazquez | 15/08/2021 10:20 | Cunnooyinka miraha leh
Waxaad u heli kartaa quraac, cunto fudud ama casho fudud. Tani Roodhi leh jiis cusub iyo fersken la shiiday in aan soo jeedinayo maanta waxay u ansaxaysaa guud iyo shisheeye. Aad bayna u fududahay in la diyaariyo… hadda oo miro guduudku ku jiro xilligii wax dhibaato ah kuma yeelan doontid, marka lagu daro, inaad doorato qaar bislaaday.
Isku dar farmaajo iyo miro mar walba waa guul. Habka ugu fiican ee cuntadani waxay noqon doontaa in la isticmaalo jiis, laakiin ma aha badeecad aan ka heli karo meel u dhow guriga, sidaa darteed waxaan ku isticmaalay farmaajo cusub oo macmal ah oo aan ka didin kii hore. Isticmaal midka aad guriga ku haysato ama si sahlan ayaad ku heli kartaa.
Ku saabsan fersken, dooro gabal bisil. Marka sauté khafiif ah waxaad yeelan doontaa iyaga oo bunni ah. Afkaagu miyuusan waraabin? Diyaarinta roodhidan waxay qaadan doontaa oo keliya 15 daqiiqo oo waqtigaaga ah, oo maxay tahay 15 daqiiqo abaalmarinta noocaas ah?
Cuntooyinkan farmaajo cusub ah iyo fersken la kariyey ayaa la cuni karaa quraac, cunto fudud ama lagu daraa casho fudud.
Nooca cuntada: Desayuno
Waqtiga karinta: 5 m
Wadarta waqtiga: 10 m
2 xaleef oo rooti ah (1 haddii ay tahay rooti tuulo)
6 qaado oo farmaajo cusub ah ayaa burburay
1 waaweyn ama 2 fersken oo yaryar
1 qaado oo saliid saytuun ah
Xanjo qorfe ah
Waxaan dubay xaleefyada kibis iyo burburi farmaajo cusub.
Waxaan si fiican u dhaqnaa fershka oo waxaan u jarjaray jajab.
Waxaan saliida ku kululeynaa digsi qaboojiyaha iyo waxaan shiilnaa qaybaha fersken ilaa ku dhawaad ​​caramelized.
Xilligii ugu dambeeyay ku rushee qorfe iyo miraha oo kari 1 daqiiqo oo dheeraad ah.
Waxaan dhigeynaa farmaajo cusub rooti iyo tan, qaybaha fersken.
Waxaan ku raaxaysanay rooti farmaajo cusub ah iyo fersken sauteed diiran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Suxuunta » Cunnooyinka miraha leh » Roodhi leh jiis cusub iyo fersken la shiiday
Baastada ukunta leh hilib doofaar iyo mozzarella